metadata - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: Metadata
သုံးမီဒီယာ XEN လွှတ်တင်: IBC 2019 ကာလအတွင်းပိုက်လိုင်း
မန်ချက်စတာ, ဗြိတိန် -2စက်တင်ဘာလ 2019 - သုံးမီဒီယာတစ်ဦးအထူးကုန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန် provider က, က IBC 2019 များ၏ကြာချိန်များအတွက် IABM အဖွဲ့ဝင် Lounge များတွင်သတ်မှတ်ထားသောအာကာသ reserved ထားပါတယ်နဲ့ XEN ၏ပို့လိုက်ကြတယ်ဖို့ IBC ကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်: ပိုက်လိုင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ဒီဇိုင်း, workflow နှင့် metadata ကိုအထူးကုလည်းမဆိုဆွေးနွေးရန် IBC ကိုယ်စားလှယ်မှမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် ...
GB ကို Labs က BroadcastAsia4မှာမောရှေပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းက software နှင့် CORE.2019 OS ကိုတခုအဖြစ်မှ
မဂ္ဂနာ (Booth 4M2-01) နှင့် Techtel (Booth 4K3-05), BroadcastAsia စင်္ကာပူ, 18-20 ဇွန်လ 2019: Intelligent သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ခေါင်းဆောင် GB ကို Labs ကအဆိုပါ All-သစ်ကိုမောရှေအော်တိုပိုင်ဆိုင်မှုစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့်အသစ်စက်စက် CORE.4 မည်ဖြစ်သည် BroadcastAsia မှာ OS ကဆော့ဖ်ဝဲ, ။ မောရှေ, CORE.4, နှင့်၎င်း၏မှေးခငျြး, CORE.4 Lite ကို GB ကို Labs က '' ဒေသတွင်းမိတ်ဖက်မဂ္ဂနာ (Booth 4M2-01) နှင့် Techtel (Booth တို့ကကျယ်ပြန့်-အထိပြပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် featured ပါလိမ့်မည် ...
NAB 2019, 6-11 ဧပြီလ Booth SL5324: GB ကို Labs ကတစ်ခုရလွယ်ကူပြီးအကျိုးရှိတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးသဖြင့်၎င်း၏လက်ရှိ SPACE အဘို့, ECHO မောရှေက၎င်း၏အသစ်သောပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းက software ကိုဖြန့်ချိခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကြောင်း features အသစ်နှင့်အတူအသိဉာဏ်သိုလှောင်မှုအကွာအဝေး Vault ပါလိမ့်မယ် ပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းဘို့။ GB ကို Labs က CEO ဖြစ်သူ-CTO Dominic Harland ပိုင်ဆိုင်မှုများအသုံးပြုသူတစ်ဦးမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်ပြသင့်တယ် "ဟုပြောသည် ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်PowerSearch®၏ချက်ချင်းရရှိနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်; Adobe က©ကို Premiere Pro ကို©အယ်ဒီတာများအဘို့အအသိဉာဏ် Metadata Search ကို
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်များက PowerSearch အဆိုပါ Premiere Pro ကို Timeline ကိုအတွက် Intelligent Metadata Search ကို Capability ဘဝမှကယျတငျ; Key ကိုနှုတ်မြွက်တော် Precise Video Clips ဖို့ရှာဖွေဖို့နဲ့ပှေါလွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက် (www.digitalanarchy.com) ယနေ့PowerSearch®ထောက်လှမ်းရေးကိုရှာဖွေ keyword ကိုရှာဖွေမှုများကို အသုံးပြု. ဗီဒီယိုအတွင်း metadata ကိုရှာဖွေကြောင်းကို Adobe ©ကို Premiere Pro ကို©အယ်ဒီတာများများအတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်၏ချက်ချင်းရရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကိုဖွင့် စကားပြောစကားများသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ရပ် ...
Marquis အသံလွှင့်ရဲ့ Project မှကားရပ်ရန်ဒိုင်ခွက်ဝေးလံသောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
သိုလှောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု tool ကို S3 serverside encryption ကိုထောက်ခံမှုများနှင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုသတင်းအချက်အလက် Marquis အသံလွှင့်ရဲ့ Avid-လက်မှတ် Project မှကားရပ်ရန် tool ကိုစီမံကိန်း၏ analytics, visualization, စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်သိမ်းဆည်းပေး, Avid သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု analytics နှင့်စီမံကိန်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရွှေစံနှုန်းဖြစ်ပြီးပေးပါသည်။ ဒါဟာ Marquis Workspace ကို Tools များနှင့်အထူးသဖြင့်ဖြစ်သော Project မှကားရပ်ရန်စနစ်များ, များအတွက်အသုံးပြုမှုခြေရာခံခြင်းအားဖွင့်အသစ်တစ်ခုဒိုင်ခွက်အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ update လုပ်ပြီးပါပြီ ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက်များက PowerSearch အဆိုပါ Premiere Pro ကို Timeline ကိုအတွက် Intelligent Metadata Search ကို Capability ကိုဖွင့်; ဒစ်ဂျစ်တယ်မင်းမဲ့စရိုက် (www.digitalanarchy.com) ယနေ့ PowerSearch, Adobe Premiere Pro ကိုအယ်ဒီတာများအနေနဲ့လုံးဝထုတ်ကုန်အသစ်အသိဥာဏ်ဗီဒီယိုအတွင်း metadata ကိုရှာဖွေထုတ်ပြန်ကြေညာ - Key ကိုနှုတ်မြွက်တော် Precise Video Clips ဖို့ရှာဖွေဖို့နဲ့ပှေါလွင်ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA (ဧပြီ 8, 2018) ဖွင့်ပေး တိကျသောသာဓကရှာရန် Google-တူသော keyword ကိုရှာဖွေမှုများကို အသုံးပြု. ...
မျိုးစပ်သောမိုဃ်းတိမ်တိုင်ထုတ်လုပ်မှု Marquis အသံလွှင့်, Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်မီဒီယာနှင့် metadata ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tool များ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖို့အလွယ်ကူဆုံးအသွင်ပြောင်းဖွင့်ပေးခြင်း၎င်း၏စီမံကိန်းကားရပ်ရန်Avid®သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်များအတွက်မိုဃ်းတိမ်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဤသည်အောင်မြင်သော Avid ISIS®နှင့် NEXIS ™လျှောက်လွှာတစ်ချောမွေ့စွာ Multi-site ကို Avid လုပ်ငန်းအသွားအလာပို့ဆောင်မိုဃ်းတိမ်ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူစီမံကိန်းကို analytics, visualization, စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်သိမ်းဆည်းပေးသည် ...
Artificial Intelligence ၏နောက်ထပ်မီဒီယာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များချမှတ်ရန် Dalet နှင့် Veritone ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်
အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန် - စက်တင်ဘာလ 14, 2017 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ပေးသူနှင့်Veritone® Inc ကို (NASDAQ: အလွန်), အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဦးဆောင်ပေးသူနှင့် ဖြေရှင်းချက်ယနေ့အသစ်တခုပူးပေါင်းကြေညာခဲ့သည်။ အသစ်မဟာမိတ် Dalet က Galaxy ဖောက်သည်အလိုအလျောက် metadata ကိုထုတ်ယူဘို့ Veritone ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် AI အနည်းပညာမူတည်ပြီးမှခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ...
DNA ကိုဖင်လန် Metadata များအတွက် Ericsson ကရှေးခယျြ
Ericsson က DNA ကို, အကြီးဆုံးလစာ-TV ကိုအော်ပရေတာများနှင့်ဖင်လန်အတွက်ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတစ်ဦးနှင့်အတူအကြောင်းအရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုန်ဆောင်မှုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Ericsson က DNA ကိုရဲ့ကေဘယ်လ်ကွန်ယက်ဖင်လန်ဒစ်ဂျစ်တယ်-ကုန်းကွန်ယက်မှနှင့်မြန်နှုန်းကျော်ဖင်လန်, အင်္ဂလိပ်နှင့်ဆှီဒငျတွင် 150 တီဗီလိုင်းများကိုကျော်ဘို့အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကြွယ်ဝတဲ့ metadata ကိုပေးလိမ့်မည်။ ငွေရတတ်သောသူ metadata ကိုအာဏာကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည် ...
Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စွမ်းရည်ကိုတိုးပှားဒါက Core မှတိုးတက်မှုကြေညာ
Denver - ဇူလိုင်လ 10, 2017 - Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်, Cloud-ဇာတိကဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ, ယနေ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်း Waze ဒစ်ဂျစ်တယ် Core မှတိုးတက်မှုများကြေညာခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်ကိုအပြောင်းအလဲကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်အသုံးပြုသူများအကြောင်းအရာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အမြောက်အများ metadata ကို update လုပ်ဖို့အဘို့အရာဖြစ်စေမည်နေစဉ် user interface ကိုမှအပြောင်းအလဲများ, သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာစေမည်။ "Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်မှာ ...
စနစ်တကျနှင့်အတူသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ် "Meta-မှတ်သားခြင်း" ဖော်ထုတ်များ၏အမှန်တကယ်အရေးပါမှုသို့မသွားမီ "metadata ကို," ငါတို့ရှိသမျှသည်ကသည်အဘယ်အရာတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါဝေါဟာရကို "metadata ကို" ဟုခေါင်းစဉ်, စာရေးဆရာ, ဖန်တီးမှုရက်စွဲ, ဖော်ပြချက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောနည်းနည်းမှုနှုန်းသို့မဟုတ်ပုံစံကဲ့သို့အသုံးပြုတဲ့စံချိန်စံညွှန်းများကဲ့သို့သောအခြားအမှုအရာ, တို့ပါဝင်သည်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာများ၏ဖော်ပြချက်, သတ်မှတ်ပါတယ်။ meta-tags များမလုပ်ကြပါဘူး ...
စတုရန်းထောင့်ကွက်စနစ်များ '' CatDV 12 Apple®နောက်ဆုံးဖြတ်Pro® X ကို 10.3 အတူစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ-စီးပေါင်းစည်းရေးကမ်းလှမ်း
Warwick, ဗြိတိန် - အောက်တိုဘာ 27, 2016 - Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များ, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် CatDV မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) စနစ်နောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီ, ယနေ့က၎င်း၏မျိုးဆက်သစ် CatDV 12 ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့အတူအဓိကတိုးတက်လာ၏နံပါတ်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ Apple®ကနေဗိုလ်လုပွဲဖြတ်Pro® X ကို (FCP X ကို) ။ အဆိုပါပေါင်းစည်းမှု X ကိုချောမွေ့စွာအပါအဝင် ပို. ပင်အစွမ်းထက်ပေးခဲ့သည်စွမ်းရည်, workflows FCP ဆောင်တတ်၏ ...
Dalet က Galaxy မှတ်တမ်းသတင်းတစ်ခုချိတ်ဆက် Multisite HD ကိုသတင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာတွေဖန်တီးလိုက်တဲ့
ဆောပိုလို, ဘရာဇီး - သြဂုတ်လ 29, 2016 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, ဘရာဇီးရဲ့ 24 နာရီသတင်းရုပ်သံလိုင်းကယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ, များအတွက် software ကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, မှတ်တမ်းသတင်း, မောင်းဖို့ Dalet က Galaxy သတင်းဖြေရှင်းချက်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် ယင်း၏ဆောပိုလိုနှင့် Araraquara တည်နေရာတစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံသတင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပလေးအောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာ။ အဘို့တစ်ခုတည်းအကြောင်းအရာ repository ကိုဖန်တီးနေ ...
Clippn နယူး cloud အခြေခံဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူလုပ်ငန်းအဆင့်မီဒီယာမော်ကွန်း Revitalizes
နယူးယောက်, နယူးယော့ - သြဂုတ်လ 2, 2016 - Clippn, ဗီဒီယိုကြပ်မတ်လျက်စတော့ရှယ်ယာရိုက်ကူးငွေရှာခြင်းအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ယနေ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-Level archive ကိုပြန်လည်ရှင်သန်ရေးန်ဆောင်မှုများရရှိမှုကြေညာခဲ့သည်။ Clippn အကြီးစား collection များကို Dalet မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာစွမ်းအားဖြင့်၎င်း၏အသစ်က cloud အခြေခံပလက်ဖောင်း၏အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် metadata မှတ်သားခြင်းစွမ်းရည်မှကျေးဇူးတင်စကားများပါဝင်သည်ရန်၎င်း၏ပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုချဲ့ထွင်။ "အများစုကထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ...
PAWA (EBS.TV) IBC 2016 စမ်းကြည့်ရန်
အဘယ်သူမျှမရပ်: 14.B01 EBS TV ကိုအကြောင်းအရာ data တွေကိုချိတ်ဆက်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပလက်ဖောင်းမှအရည်အသွေး, တိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံ metadata ကိုနှင့် EPG ကိုန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ယင်း၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် In-အိမ်သူအိမ်သားဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့နှင့်အတူ coupled EBS '' စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် EPG ကိုအချိန်ဇယားဆွဲလျှောက်လွှာ Pawa, ကုမ္ပဏီပြိုင်ဘက်ကင်းနှင့်ထူးခြားသော client-အဓိကထားဆိုပို့ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ကနေသူ့ဟာသူခွဲခြားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ EBS အတူလုပ်ကိုင် 20 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကိုကျော်ရှိပါတယ် ...